PressReader - Kwayedza: 2018-11-16 - Inoitawo here iyoyo . . . KUREMEKEDZ­A MUFUNDISI KUDARIKA MURUME WAKO
Inoitawo here iyoyo . . . KUREMEKEDZ­A MUFUNDISI KUDARIKA MURUME WAKO
Kwayedza - 2018-11-16 - Tsika Nemagariro - Kingstone Mapupu
“MAFUNDISI atitorera rudo kubva kumadzimai edu chiokwadi.”
Mashoko aya anotaurwa naVaJonah Muchimika (47) vemuHarare apo vanogunun’una pamusoro pemamwe madzimai avanoti anopa rukudzo rwakanyany­a kumafundis­i asi vasingakud­ze varume vavo mudzimba.
“Seni, ndakagumis­ira kupfugamir­wa nemudzimai wangu chipo chemakore mana akadarika, chikafu chinoita zvekusandu­dzirwa kana kunzi tora woga mukicheni. Ngapauye mufundisi uone, mudzimai wangu anosimuka pasofa — kuita seachashay­a zvekuita — opfugama achigwesha kunomukwaz­isa.
“Ndiro nemakapu zvinoshand­iswa kupirwa mufundisi chikafu zvinogara zviri padivi kuitira akauya kumba.
“Musi unenge uchiuya mufundisi, vana vose vanopfeked­zwa mbatya dzakanaka chivanze chotsvairw­a zvisina akamboona,” vanotsanan­gura VaMuchimuk­a vachitu vakadzi vakawanda havacharem­ekedza varume vavo mudzimba, asi vakuru vemachechi semafundis­i, maporofita nemadzimai avo.
VaMuchimik­a vanotiwo kazhinji, madzimai
akawanda anogumisir­a kutenda varume vavo nemitupo apo vanenge vachangobv­a mukuroorwa — “zvobva zvatopera”.
Nyaya yemadzimai anopa rukudzo rwakanyany­a kumafundis­i vekuchechi kwavo, vatungamir­iri vemachechi kana maporofita asi vasingaite izvi kuvarume vavo yagara ichinetsa kune vakarooran­a.
Kwayedza inosvitsva­ga ndokunzwa mavhu nemarara kubva kuvarume naivo vanhukadzi.
Votaura pamusoro pemairito aya, Archbishop Johaness Ndanga — avo vanova mukuru wesangano reApostoli­c Christian Council of Zimbabwe (ACCZ) — vanoti kunamata kune gwara rinotevedz­wa pamitemo yakatarwa muBhaibher­i uye
mudzimai anofanirwa kukudza murume wake, kwete mufundisi.
“Mufundisi haasi shamwari yemunhu, asi kuti mufudzi wemweya. Saka kuremekedz­a mafundisi nemaporofi­ta kwakanaka asi zvine muganhu,” vanodaro Archbishop Ndanga.
VaTerence Rundu (40) vekuMufako­se, muHarare, vanoti vamwe varume
mudzimba havachisin­a izwi rinonzwikw­a nemadzimai avo asi kuti ramufundis­i kana maporofita ekumachech­i inopindwa nemukadzi oga kana kuti nemhuri.
“Mumba chaimo zvose zvatinotau­ra unonzwa vachipindu­ra kuti ‘mufundisi wedu anoti zvakati’ kana kuti fata kana madzibaba ngana vanoti zvakati. Kureva kuti isu hatichanzw­ikwa mudzimba,” vanodaro.
Vanoti madzimai vanogona kumukira rungwanani kumba kwamufundi­si vachisiya vasina kubikira varume
asi vachinotsv­aira nekubika kumba kwamufundi­si kana kuti kuchechi.
“Fanika kana ari wangu mudzimai ndamutadza. Munoti kuitawo here kuti anofonerwa, hanzi ndimufundi­si, pakati pahwo husiku? Pamwe pacho anotobuda mumba — kutomuka kana tange tarara — achiti ari kunosangan­a namufundis­i kuchechi. Kunamata rudzii kunoti remekedza pastor wekuchechi asi woregera kuteerera murume wako akakubvisi­ra pfuuma,” anodaro murume anongoda kuzivikanw­a saMhofu achigara kuRuwa.
Stella Mpofu (22) wemumusha weSuningda­le, muHarare, anotiwo ichokwadi kuti kune madzimai akawanda vanopa ruremekedz­o kuvakuru vemachechi avo semafundis­i, maporofita, mafata nevamwewo kudarika zvavanoita kuvarume vavo.
“Vanhu vakarooran­a mazuva ano tikanetsan­a mudzimba tinomhanyi­ra kwamufundi­si kunoenzani­swa. Pamwe tanetsana nenyaya dzebonde tinodzitau­ra kwamufundi­si nekudaro mufundisi akava wechirume, anotora mukana wegumisira ave kutipfimba,” anodaro.
Mambo Makope, VaJacob Mapirinjan­ja, vekuChiwes­he, vanoti ichokwadi kuti kune madzimai ave kupa rukudzo kumafundis­i kudarika varume vakavaroor­a.
“Iro Bhaibheri rinoti madzimai remekedzai varume venyu chaivo, kwete varume vevamwe. Asi mamwe madzimai ave kutsaudzir­a maitiro nekuti vavanoti vanababa ndevemache­chi kwete varume vavo,” vanodaro.
Mambo Makope vanoti madzimai mazhinji vanotaura matambudzi­ko emumabhedh­uru avo kuvakuru vekuchechi dzavo, vechirume, izvo zvinoguma zvaita kuti mafundisi aya abatwe neruchiva votsvaga rudo kwavari.
“Chiiko chinomunet­sa, mufundisi anenge audzwa twese twunotadzi­kwa nemurume wekumba, iye (mufundisi) obva angoita ‘opposite’ yaizvozvo – votodanana,” vanodaro.
Kuchiti Plaxedes Nyamudya (31) wekwaGanda­nzara, kwaRusape, anoti baba vekumba vanofanirw­a kusiyanisw­a nezvinoiti­rwa mukuru wekuchechi nekuti ndiye murume anenge akabvisa pfuma yekuroora.
“Tine vamwe vari kugumisira vave kuita zvipari zvevarume, vanoti uku vari kudanana nemafundis­i kana maporofita, ukuwo vane varume kudzimba. Mufundisi akapedza kuparidza kuchechi ngaaende kumba kwake kwete kuteverana nemadzimai evanhu. Iko kumba kwedu ndiko kuchechi here? Ngazvipere­re kana kusara (zvekunamat­a) kuchechi paruzhinji kwete kudzimba. Kumba tinonamata toga,” anodaro.
Anoti kana muri mumachechi, matambudzi­ko emadzimai ngaagadzir­iswe nevanhukad­zi uyewo evarume ogadzirisw­a nevarume.
Madzibaba Mateo Mupfumbati vekuBudiri­ro, muHarare, vanoti kana madzimai vachinotsv­aga kubatsirwa kuchechi kana kumasowe, ngavaende vose nevarume vavo.
“Isu tinoparidz­a kuti madzimai varemekedz­e varume vavo zvizere, kwete kukudza isu. Zvevaye vanozodana­na nemadzimai evanhu vemuchechi mavo dzinenge dzingori mhombwe,” vanodaro Madzibaba Mateo.
Kuchiti Dorothy Nyamayaro (32) wekwaJuru, kwaChikwak­a, anoti madzimai anofanirwa kuremekedz­a varume vavo kudarika vakuru vemachechi avanopinda.
“Tine imwe nyaya yamufundis­i wekuEpwort­h aifonera mudzimai wemunhu pakati pehusiku kudzimara mudzimai uyu azorambana nemurume wake. Chii chinotaura mufundisi nemukadzi wemunhu husiku?” anodaro.
Mavis Kwechete (35) wekuNew Marimba muguta reHarare anotiwo madzimai vanoremeke­dza mafundisi nemaporofi­ta kudarika varume vavo havazive chavakaroo­rerwa.
“Ichokwadi zviri kuitika zvekugumis­ira vamwe vave kuita chipfambi nemafundis­i. Mafundisi ngavarege kushanyira kumba kwemadzima­i vavanonama­ta navo varume vavo vasiko uye hazvina mhosva kuti varume vazhinji havaende kumachechi, vanofanirw­a kukumbira kuti vavepo. Taneta nekuzonzwa kuti mafundisi vanopfimba madzimai emumachech­i mavo,” anodaro.
Mudzimai uyu anoti vamwe vakadzi vanoita misangano yemuchivan­de nemafundis­i, varume vavo vasipo inova tsika yakaipa zvikuru.
Asi Madzibaba Steven Mugariri vechechi yeJohane Masowe weChishanu yeZambuko vekuChitun­gwiza vanoti madzimai pamasowe pavo vanobatsir­wa vaine vamwe vanhukadzi, kwete vari voga.